I-FIFA Mobile 2017 isiyatholakala kumadivayisi we-iOS ne-Android | Izindaba zamagajethi
Unyaka owodwa ngaphezulu, futhi sekuvele kunembalwa, I-FIFA Mobile 2017 isiyatholakala ukulanda kumadivayisi we-iOS ne-Android, ngokusebenzisa i-App Store ne-Google Play ngokulandelana. Ngaphezu kwalokho, kulo nyaka iphinde yaqala ukubonakala entsha Windows 10 Iselula ukuze noma yimuphi umsebenzisi osebenzisa uhlelo olusha lweMicrosoft olusebenzayo akwazi ukushaya amagoli ngaphandle kokuphumula.
Phakathi kwezinto ezintsha esizithola kule nguqulo ye-simulator yebhola ethandwayo yiyona ubuhlakani bokufakelwa obuthuthukisiwe, ihluzo ezingcono negeyimu evuselelwe. Njengokungathi konke lokhu kubonakala kukuncane kuwe, abadlali manje banemizwa futhi bazothinteka yimicimbi eyenzeka ngesikhathi somdlalo.
Njengobusha obubalulekile kukhona nethuba lokudlala ngemodi entsha yomdlalo, ebhabhadiswe njengokuhlaselwa, okusamele sizame ukukuthola ngokujulile ukukutshela ukuthi le ndlela entsha yokudlala iFIFA 17 ibalulekile noma cha.
Ngeshwa, le FIFA Mobile 17 nayo ihambisane nezindaba ezimbi futhi kungenxa yokuthi ukulanda kumahhala futhi yi-100 MB kuphela, okungumdlalo ongekho usayizi omkhulu, kumele ngaso sonke isikhathi sixhunywe kunethiwekhi yamanethiwekhi, okuzosivimbela ekudlaleni uma singenayo i-inthanethi.
Nazi izixhumanisi zokulanda iFIFA Mobile 17 ye-Android, iOS neWindows 10 Mobile.
I-FIFA Mobile 17 ye Windows 10 Iselula
Ukulungele ukuqala ukujabulela ibhola kudivayisi yakho yeselula?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-FIFA Mobile 2017 isiyatholakala kumadivayisi we-iOS ne-Android
Izithombe zokuqala ezisemthethweni zeBlackBerry DTEk60 ziyahlungwa